Onye bụbu Etihad Aviation VP Vijay Poonoosamy ugbu a Onye isi na Q1 na Singapore
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Onye bụbu Etihad Aviation VP Vijay Poonoosamy ugbu a Onye isi na Q1 na Singapore
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Vijay Poonoosamy, onye bụbu onye isi ala na ihe ijuanya kpọrọ ya ka ọ pụọ maka Etihad Airways na Disemba 8 wee hapụ ụgbọelu mba UAE, Etihad Airways na Disemba 31, 2017.
Vijay laghachiri obodo ya bụ Mauritius. Nke a mere n'etiti mkpọtụ ụlọ ọrụ na -eme maka nnukwu mfu na nsogbu ndị ka na -aga n'ihu ma na -emetụtakwa itinye Etihad na itinye ego na Air Berlin, Alitalia na Air Seychelles.
Vijay Poonoosamy, onye bụbu VP ihe ijuanya kpọrọ ya ka ọ kwụsị maka Etihad Airways na Disemba 8 wee hapụ ụgbọelu mba nke UAE, Etihad Airways na Disemba 10, 2017
Vijay laghachiri obodo ya bụ Mauritius. Nke a mere n'etiti ụlọ ọrụ shakeup. Vijay so na ndị otu dị na mbụ Etihad CEO James Hogan, onye hapụkwara Etihad. Ihe a niile mere na nnukwu ọghọm na nsogbu ndị ka na-aga n'ihu ma metụtara njikọ Etihad na itinye ego na Air Berlin, Alitalia, na Air Seychelles.
O bu ihe ijuanya na onye mbu VP maka Etihad Aviation Group kwabiri na Singapore ka o sonyere QI Group dika Director International and Public Affairs. Ya na ezinụlọ ya si Mauritius kwaga Singapore.
Na ozi email, o kwuru, sị: Afọ iri na atọ na Etihad Aviation Group na Abu Dhabi anabatara m ịnakwere-ịkwụ ụgwọ iji sonyere QI Group dị ka Director International na Ọha na Ọha. Mụ na ezinụlọ m ka kwagara Singapore.
Anọ m na-abụ onye isi oche nke Hamis Air Transport Organisation nke Montreal, onye ndị otu ya bụ ndị amara maka ndị isi ụgbọ elu ụwa, na onye otu ndị Advisory Board nke World Tourism Forum Lucerne ”kwuru Vijay Poonoosamy na ndetu nye ndị enyi.
Vijay bụ onye ọka iwu na ọdụ ụgbọelu na London, onye isi nchịkwa nke Air Mauritius, onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu nke Mauritius na onye isi oche nke International Affairs nke Etihad Aviation Group (ruo 31 Disemba 2017). Vijay bụ onye isi oche nke 1994 ICAO World Transportation Conference World, ICAO Rapporteur na Onye isi oche nke 1999 ICAO Special Group na Modernization nke Warsaw Convention, Onye isi oche nke Kọmitii Pụrụ Iche nke ICAO nke 2009 na Mgbakọ Nche Nchebe na Onye njikwa na Eprel 2012 Nzukọ ICAO Air Transport Symposium, Mgbakọ nke ICAO Pre-Air Transport Conference Symposium, Machị 2013 ICAO Nzuko maka mmepe na-adigide nke njem ụgbọelu na Africa na ICAO ICAN Symposia nke 2015, 2009, 2010 na 2011. Vijay bụkwa onye isi oche nke Air Kọmitii Transportgbọ njem nke African Civil Aviation Commission, Onye isi nke Kọmitii Mmepụta IATA, Onye isi nke IATA Council Advisory Council na Onyeisi nke IATA Task Force na Ihe Gbasara International Aviation.
Ndị otu ụlọ ọrụ QI bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke mba dị iche iche na-enye azụmaahịa dị iche iche gụnyere agụmakwụkwọ, ile ọbịa, ire ere, ọrụ ego na ụlọ ahịa.
Ha na-ewe ihe karịrị mmadụ 1500 gafere mba 30, yana ọfịs mpaghara mpaghara dị na Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand na Philippines. Dị ka otu, ha na-elekwasị anya na-enyere ndị mmadụ aka ibili site na ngwọta nke ịzụ ahịa ike, na-eme ka ndụ ndị obodo mepere emepe ma gbanwee ngalaba agụmakwụkwọ. Ha na-agbanwe mgbe niile dị ka otu ma na-agbasawanye site na itinye ego na azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, na-ekepụta mmekọrịta dị elu, ngwaahịa na ọrụ n'ụwa niile.